Thierry Henry Oo Ka Door Biday Roberto Firmino Xidigaha Mohamed Salah Iyo Harry Kane – Gool FM
(Real Madrid) 15 Maajo 2018. Halyayga kooxda Arsenal Thierry Henry ayaa wuxuu shaaca ka qaaday weeraryahanka uu u arko inuu dhameystirnaa xili ciyaareedkan horyaalka Premier League ee dalka England.
Layaabka ugu weyn ayaa ah in halyaygii hore kooxda Arsenal uusan dooranin xidiga Tottenham Hotspur Harry Kane iyo laacibka Liverpool Mohamed Salah, wuxuuna badalkiisa doortay laacibka reer Brazil ee Roberto Firmino.
“Kama hadlin ciyaaryahankii ugu fiicnaa kubada cagta, ama shaqada ugu fiicnaa, waxaan ka hadlayaa guud ahaan, taasoo ka kooban dhinacyada kala duwan, fekerkeyga Firmino waa weeraryahanka ugu dhameystiran horyaalka Premier League”.
“Wuxuu dhaliyay isla markaana uu caawiyay goolalna ka yar Salah, laakiin wax qabadkiisa kubad la’aanta ee xili ciyaareedkan ayaa ka dhigeysa in lagu amaano, wuxuu ku qanacsanaa inuu awood u yeesho caawinta ciyaartoyda kale sida Salah oo kale”.
Si kastaba waxaa xusid mudan in Liverpool ay xili ciyareedkan kaga dhameesatay booska kaalinta 4-aad ee dhanka kala sareynta Premier League, waxaana sidoo kale ay gaareen finalka Champions League ay kula balansan yihiin Real Madrid 26-ka bishan May.
Lama filaan laga soo sheegayo liiska xulka ingiriiska ee ka qayb galaya koobka adduunka